मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | पोखरेलको जिम्मेवारी बढुवा कि घटुवा ?
पोखरेलको जिम्मेवारी बढुवा कि घटुवा ?
काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पाएको जिम्मेवारी अनि पदबाहाली अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । झकि झकाउ कार्यालयमा बसेका र आफुलाई प्रधानमन्त्री बराबर ठान्ने पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयको एका छेउमा थन्किंदा उनको पद सरकारी कार्यालयको दर्ता चलानी फाँट जस्तो देखिको छ ।
प्रायजसो मन्त्रीहरुले कुर्सी वरीपरी कम्युटर लगायत फाईलका चाङ देखिन्छ तर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पदबाहाली गरेको बेला उनको टेवुलमा न कम्युटर थियो, न फाईलको चाङनै थियो। सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारमाध्यम मार्फत मानमर्दनको चर्चा भइरहँदा पोखरेल स्वयं भने आफुले पाएको जिम्मेवारी नेपालमै नौलो भएको भन्दै निशंकोच आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
थियो त केवल एउटा सानो बोतलमा सेनिटाइजर र अर्को छेउमा टिस्यु पेपर । खासमा पार्टीको सचिवालयमा समीकरणका कारण ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओालीले बिदाई नगरेका हुन् भन्ने प्रमाणस्वरुप उनको पद बहाली तथा कार्यालयलाई हेर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी ईश्वर पोखरेललाई सरकारबाट बिदा गरिएको हो भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ। किनकी रक्षा मन्त्रालयमा तीनवटा तलामा रहेको उनको सचिवालय अव एउटा कोठाबाट चल्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय यसैपनी अलिक साँघुरोनै छ। २०७२ बैशाखकाे महाभुकम्पले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकाे कार्यालय जीर्ण भएपछि साविककाे स्थानीय विकास मन्त्रालयलाइ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे रूपमा प्रयाेग गरिंदै आएको छ ।
किन हटाइए पोखरेल ?
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको पहिलो वर्ष महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यसबाट सन्तुष्ट थिएनन् । सेनापति थापा धेरै चर्चामा आउन खोजेको मन्त्री पोखरेलको बुझाइ थियो ।
आफुभन्दा सेना चर्चामा आउन खोजेको भन्दै पोखरेल असन्तुष्ट बनेका थिए। काठमाडौ – निजगढ फास्टट्याकदेखि औषधी खरिदसम्म सेना र पोखरेलबीच टसल बढ्दै गएको थियो।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पोखरेलविरुद्ध पटक पटक गुनासो पोखेका थिए। त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रीको फुली खोसेर पोखरेललाई आफ्नै सचिवालयकाे हैसियतमा ल्याइदिएका थिए ।